Koloiko sy Hajaiko ny Teniko | Kônferansa Momba ny Soratra: Voarakitra anaty boky ny votoatin-kevitra - Gazety Taratra
Gazety Taratra, 12 Novambra 2018
Kônferansa Momba ny Soratra 2018: Voarakitra anaty boky ny votoatin-kevitra.
Nosoratan'i Hary Razafindrakoto, gazety Taratra, 12 Novambra 2018, pejy 4.
Hetsika kolontsaina sy fanabeazana manomboka mahazo vahana ny Kônferansa Momba ny Soratra. Manomboka manana ny lanjany ihany koa satria nahitana fivoarana lehibe hatrany raha oharina amin'ny teo aloha.
Tontonsa soa aman-tsara, ny asabotsy 10 novambra teo tao amin'ny Haitsiron'Iarivo eny Alarobia ny Kônferansa Momba ny Soratra andiany faharoa na ny KMS 2018. Hetsika ho fampitiavana sy ho fampivelarana ary ho fampiainana hatrany ny tontolon'ny soratra sy ny teny fanaon'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko (KHT). Anisan'ny nisongadina indrindra tamin'izany ny nivoahan'ny boky Kônferansa momba ny soratra andiany faharoa (KMS 2018). Voarakitra ao anatin'io boky io avokoa ny votoatin'ny velakevitra nataon'ireo efatra mianadahy teny an-toerana. Tafiditra ao anatin'ny boky ity avokoa ireo hevi-baventy sy mafonja narahhim-panazavana feno tanteraka nandritra ny famelabelaran-kevitra nataon'Andrianimerina Hobiana, i Riambola Mitia, i Sitraka Feno tanteraka ary i Na Hassi. Mpandaha-teny izay samy nanamafy rahateo ny lanjan'ny boky eo amin'ny fampivoarana ny isam-batan'olona sy ny fiarahamonina ary y firenena iray manontolo mihitsy. I Johana Ra, mpanolotsaina ao amin'ny Zoromanga, no nanoratra ny Teny mialoha ary Soamiely Andriamananjara, tonia mpanatanteraka ao amin'ny Takelaka Tsara Soratra, kosa no nanao ny teny farany ao amin'ny fonon'ny boky.
Samy nanan-danja lehibe ho an'ny mpanatrika avokoa ireo lohahevitra efatra novelabelarina nandritra ity KMS 2018 ity. Vokatr'izay, nafana ny fifanakalozan-kevitra teo amin'izyireo. Anisan'ny goavana tamin'izany ny tokony hatao hiatrehana ireo lesoka mahatonga ny teny Malagasy hiala tsikelikely eny am-bavan'ny Malagasy tompony. Tao koa ny olana momba ny fanabeazana tsy mifaka amin'ny maha Malagasy ka mampitsingevana zavatra maro, sns.
Natsidiky ny mpanatrika teny antsefatsefan'ny fifanakalozan-kevitra teny ihany koa ny tokony hanatanterahana fifaninanana maro eo amin'ny tontolon'ny soratra. Hitondra finiavana sy famporisihana ary fikarohana bebe kokoa ho an'ny mpanoratra sy izay vonona ny hanoratra ny fisian'ireny fifaninanana ireny, hoy ireo nambaran'ireo nifanakalo hevitra.
Nipoitra nandritra ny KMS 2018 ihany koa ny tolo-kevitra ny amin'ny tokony hamoahan'ny KHT reviio hirakitra asa soratra voafantina.
Marihina fa nanohana hatrany tamin'ny fanatontosana ny KMS ny Haitsiron'Iarivo sy ny Zoromanga.